Since 1960 – xafiisyada socdaalka somaliland oo qalabayn casri ah lagu samaynayo – Final Diet
Since 1960 – xafiisyada socdaalka somaliland oo qalabayn casri ah lagu samaynayo
Xafiisyada Socdaalka Somaliland oo Qalabayn Casri ah Lagu Samaynayo
Berbera (Maan)- Madaxa Hay’adda Socdaalka Somaliland Maxamed Cismaan Caalin ayaa Maanta shaaca ka qaaday in dib u dhis lagu samaynayo xafiisyada laamaha Socdaalka ee dalka oo qalab casri ah lagu qalabayn doono.
Madaxa Laanta Socdaalka Maxamed Cismaan oo u waramayay Warbaahinta Isagoo ku sugan Madaarka Berbera, waxa uu intaa ku daray in dayactirkan iyo dib u dhiskan ay maal galinteeda bixisay hay’adda Caalamiga ah ee IOM.
Madaxa Hay’addaasi Caalamiga ah IOM ee Somaliland Mr Iuliam Circo , ayaa sheegay in hay’adiisu ay hore hay’adda Socdalka uga caawin jirtay dhinaca tababarada iyo kor u qaadista aqoonta shaqaalaha.
Laamaha Socdaalka ee dalka , waxaanu xusay in haatan ay dhigayaan xafiisyada qalab casri ah oo shabakad isku xidha dhamaan Laamaha socdaalka ee dalka , iyadoo dadka diyaaradaha saaran iyo kuwa ka dhoofayaba ay saari doonaan waxa loo yaqaano Computer System .
Madaxa hay’adaasi waxa kale oo uu sheegay in hay’adiisu deeqda ka hesho dawlada Ingiriiska , iyadoo sanadkiiba ku caawisa Nus Malyuun Doollar , iyadoo Mashruucani hada la bilaabayaa ay hor dhac u yihiin Mashaariic soo socota.
By: Somaliland Nation/ Berbera